Tshatisa iiNgelosi ngokuphakamisa ukuVibration kwakho okuMandla
Kubalulekile ukuphakamisa ukutshintsha kwakho xa uzama ukunxibelelana neengelosi kunye nemiyalezo yezithunywa zeengelosi. Iingelosi zinobunzima bokukhanya kunye nokududuza kwinqanaba eliphezulu kakhulu, ngoko kunceda xa uqala ukukhangela iindlela zokuphakamisa ukutshintsha kwakho ukuze ube nolwazi olucacileyo xa uxhulumana. Nazi ezinye zeendlela eziphakamisa ukunyakaza kwakho:
Ukutya (ngokukodwa inyama ebomvu kunye notywala kudla ukuba namandla angaphantsi)
Yiba nesimo esihle. Jonga iingcinga zakho! Ukucinga okulungileyo , kuthetha amazwi athile.
Ukuthembeka. Ukunyaniseka kwakho kubandakanya indlela osebenzayo xa kungekho mntu ukhangele.
Ukuxolela, inceba. Intukuthelo, ityala kunye nentlungu ziyanciphisa intshukumo yethu. Funa uncedo olufunekayo ukuhamba ngale mvakalelo enzima, ususe ixesha elidlulileyo elinokusibopha.
Sichitha ixesha kunye nezilwanyana zenu, nibakhathalele kwaye nithetha nabo.
Amakristali , vumela ukuba uqoke amandla okuphilisa amagugu kunye neekristal.
Ubume, kuquka imithi namanzi
Yoga kunye nokuphefumula
Ukuba ebusweni beBantu abaPhezulu beVibrating
Abanye abantu bakhanya ngakumbi kunezinye. Sonke sazi aba bantu abagciniweyo ngokukhawuleza. Baye batyebile kwaye bavame ukuzama ukwenza konke okanye ezinye zezinto ezichazwe ngasentla. Ukuba nje ebusweni babo kunokusiphakamisa.
Zifuna ukuba kunye nabahlobo kunye nabantu.
Ungazi njani ngokuqinisekileyo ukuba uhambisa iiNgelosi
Kubalulekile ukuphakamisa ukunyakaza kwakho xa uzama ukuba ngumzila. Uyabona, iingilosi zinobunzima bokuKhanya kwaye ziduduza kwizinga eliphezulu kakhulu, ngoko kuya kunceda xa uqala ukukhangela iindlela zokuphakamisa ukuzula kwakho ngokwakho.
Enye yezinto ozoyiqonda kukuba xa ushenxisa yonke into iya kubonakala ngathi ucinga. Esi sizathu esikhulu kunazo zonke abantu bayathandabuza oko bakufumeneyo. Bacinga ukuba "yibo kuphela." U-Alonya, isithunywa sam, uyitshilo isizathu sokuba le nto kukuba indawo yengqondo iindawo eziphakamileyo ezisetyenziselwa ukuhambisa ubulumko nokuphulukisa kusemgangathweni omnye wengqondo apho ukucinga khona. Kodwa u-Alonya uthi xa umntu eqhubeka eqinisa ukuxhamla ngokusebenzisa iindlela ezintsha ze-neuro-pathways ezidalwe kwingqondo. Emva kwesikhashana akuyi kubonakala ngathi kufana nokucinga kwakho.
Hlaziya, Musa ukuzama Kangako
Ukuzama kanzima kunokuba kukuvelisa ukuvelisa. Ukunyanzeliswa, ukuxoshwa, ukuxhatshaza amandla okuzama ngamandla akuvumeli ukungahambi, ukugeleza kwamanzi okutshatyalaliswa. Kwaye njengamanzi, uya kushenxisa indlela esuka kuwe ukuba uzama nzima ukusekela amandla. Jonga nje kuyo, kwaye ebaluleke kakhulu, cela iingelosi zakho ukuba ziqinise iindlela zakho zonke ixesha oya kuzo ukucamngca.
Ehlelwe nguPhylameana lila Desy
Amagama angama-12 anzima kakhulu kwizilwanyana
Hlalani 'Uxolo ebusuku' ngesiSpanish
Imbali yokuBonga kunye neNkcubeko